Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo markii ugu horaysay si wada jira ula kulmay Gudoomiyaasha Waxbarashada Gobolada iyo Degmooyinka. – Ministry of Education in Puntland
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare oo markii ugu horaysay si wada jira ula kulmay Gudoomiyaasha Waxbarashada Gobolada iyo Degmooyinka.
By editor	/ March 15, 2018
15/03/ 2018- Agaasiamaha Waxbarashada iyo Tacliinta sare Maxamed Cali Faarax (Farmaryeeri) ayaa markii ugu horaysay si wada jira ula kulamay Gudoomiyaasaha Waxbarashada iyo Degmooyinka Puntland intii xilka loo soo magacabay.
Shirkaa ayaa ujeedadiisu ahayd in laga wada hadalo xaladaha Waxbarashada Gobolada iyo degmooyinka sidii loo hormarin lahaa waxbrashada Gobolada iyo sidii loo dadajin lahaa siyasadaha waxbarashada Gobolda iyo Degmooyinka iyo sharciyeenta iskuulada, Tayeynta Waxbarashada.
Shirkaan oo saacaddo dheer socday ayaa waxaa ka soo qayb galay Agaasimaha waaxda Tayeynta iyo kormeerka, Agaasimaha Waaxda Waxbarashada Tooska ah iyo dhamaan Gudoomiyaasha Waxbarashada Gobolda iyo Degmooyinka.
Agaasimaha waaxda Tayeynya iyo kormeerka C/qaadir Yuusuf Nuux ayaa aad ula hadalay isagoo gudoomiyaasha ka codsaday ina xoojiyaan Waxbarashada Gobolada iyo degmooyinka si loo helo hanaan Waxbarasho oo Tayo leh,
C/qaadir Yuusuf Nuux ayaa u sheegay in Gudoomiyaasaha Waxbarashada iyo Degmooyinka inay laf dhabar u yihiin Waxbarashada isagoo ku yiri waxaa haysaan shaqo culus oo ajarkeeda la soo koobi karin.
Agaasimaha Waaxada Tayenta iyo Kormeerka ayaa kala hadalay Gudoomiyaasha Waxbarshada Gobolada Qodobadan soo socda.
Dhammaan dugsiyada hadda shaqeeya waa in ay iska diiwaan galiyaan Wasaaradda Waxbarashada oo la soo dhamaystiro sharciyeeyntoodii.
Sidoo kale waa inay dhammaan macallimiinta ajnabiga ah iska diiwaan galiyaan Wasaaaaradda Waxbarshada.
Dugsi hoose,mid dhexe iyo mid sare toonna lama furi karo illaaa ogolaansho laga helo Wasaaradda.
Lama aqoonsan doono dugsi aan ku dhaqmin manaahijta iyo awaamiirta wasaaradda.
Ogolaansho iyo diiwaan galin waxaa la siin doonaa dugsigii buuxiya shuruudaha is- diiwaan-galinta.
Mas’uuliyiintu waa in ay xaqiijiiyaan in dhammaan dugsiyadu soo gudbiyaan natiijada imtixaankii sanad-dugsiyeeedka 2017-2018 sidii, horey loogu wargeliyey.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Maxamed Cali Faarax (Farmaryeeri) oo shirka xiritaankiisa lahaa ayaa kala hadlay inay Gudoomiyaasho adkeyaan Waxbarshada Gobolada iyo degmooyinka isagoo raaciyey in Imtixaankii Dowlada Puntland dhaqalihiisa soo yaradeen kana qayb qaatan Waaridiinta iyo iskuulada sidii loo helilaha wacyigalin ku aadan imtixaanka qaybtooda ugu aadan.
Agaasimaha Guud ayaa sheegay inay iskuulada sharci daradda ah oo aan ku haboonayn goobo Waxbarasho shaqo gooniya laga qaban doono.
Agaaasimaha Guud ayaa waxaa uu aad ixtiraamay Gudoomiyaasha Waxbaarshada Gobolada iyo degmooyinka shaqada adag ay hayaan iyo daruufaha jira isagoo ku amaanay shaqo adkaysi iyo dlqaadba in dhabarka u riteen balse laga baxayo.